Vahaolana akany mandeha ho azy
Cross - tenona tsy tenona no karazana voamadinika malaza indrindra ankoatry ny voam-teboka. Ity karazam-bary ity dia tsara tarehy sy lamaody kokoa noho ny voamaina. Mety kokoa amin'ny lamba aseho eo ivelan'ny vokatra. Toy ny lamba ampiasaina hamonosana voninkazo, toy ny boaty tsy misy tenona, izay fahita any Chine.
Ny lamba fanoherana bakteria, na antsoina hoe lamba Antimicrobial dia natao hiadiana amin'ny fitomboan'ny bakteria, bobongolo, holatra ary mikraoba hafa. Ireo fananana miady amin'ny mikraoba ireo dia avy amin'ny fitsaboana simika, na ny famaranana antimicrobial, izay ampiharina indrindra amin'ny lamba mandritra ny dingana famaranana, manome azy ireo ny fahaizana manakana ny fitomboan'ny mikraoba.
Inona ny lamba antimicrobial?
Ny lamba antimicrobial dia manondro ny lamba rehetra izay miaro amin'ny fitomboan'ny bakteria, ny bobongolo, ny ahitra ary ny zavamiaina bitika hafa. Izany dia tratra amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny lamba amin'ny famaranana antimicrobial izay manakana ny fitomboan'ny mikraoba mampidi-doza, mamorona fiarovana fanampiny ary manalava ny andro an-damba.
Ny famaranana maharitra amin'ny afo dia antsoina koa hoe famaranana ny afo. Ny lamba vita dia tsy mora mandoro sy mamono afo. Izy io dia tratra amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo retardants mirehitra.
Ho an'ireo retardants mirehitra mba hampiasaina amin'ny lamba tsy tenona, dia tsy maintsy mahafeno ireto fepetra manaraka ireto izy ireo:
①Maty ny poizina, ny fahombiazana avo lenta ary maharitra, izay mety hahatonga ny vokatra hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fenitry ny lelafo;
②Miorina tsara orina, famokarana setroka ambany, ary afaka mamaly ny takian'ny lamba tsy tenona;
③Aza mampihena be ny zava-bitan'ny lamba tsy misy tenona;
④ Ny vidiny ambany, izay mampihena ny vidiny.
Ny lamba tsy tenona manitra dia ao anaty lamba tsy tenona hanampiana tsiro, ka mamoaka fofona tsy vita tenona ilay lamba!
Amin'ny ankapobeny, ny lamba manitra tsy manenona dia manana ny mampiavaka ny lamba tsotra tsy tenona, ary karazana lamba tsy voatenona vaovao miaraka amina fampiharana marobe.
Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Vidin'ny lamba lamba, Pp lamba tsy tenona, Fitaovana tsy tenona, Lamba tsy tenona,